Uzo esi aga na họtelu Tehran ka Cappadocia? | RayHaber | raillynews
[11 / 02 / 2020] Nchicha Nkocha nke Nano na Tram na Bus na Kocaeli	54 Sakarya
[11 / 02 / 2020] TRNC na-ewebata Cargbọ ala ya GÜNSEL B9	90 TRNC
[11 / 02 / 2020] Gọọmentị na-agbachitere YHT Abonman Hike Site na Okwu 'A Kpebisiri Ikpe Na-ezighị Ezi'	06 Ankara
[11 / 02 / 2020] Ka ụgbọ elu nke Atatürk mepee ọzọ maka njem ụgbọelu	34 Istanbul
[11 / 02 / 2020] Sakarya Nostalgic Tram Project gbanwere	54 Sakarya
HomeTurkeyCentral Anatolia Region50 NevsehirUzo esi aga na họtelu Tehran ka Cappadocia?
21 / 01 / 2020 50 Nevsehir, 98 Iran, Central Anatolia Region, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Akwụkwọ Ozi Okwu Mmalite, Turkey
Uzo esi aga na họtelu Tehran ka Cappadocia
Caga Cappadocia dị ka ileta mbara igwe ọzọ. Anyị nwere ezigbo ihu ọma na anyị nwere ụdị ọnọdụ ahụ pụrụ iche n'obodo anyị. N'ebe a ị nwere ike ịga ije n'ime obodo dị n'okpuru ala, were foto na-enweghị atụ n'etiti oke okwute, jiri ụkwụ na-agafe na ndagwurugwu ma nọrọ n'ụlọ nnukwu ọgba. N'aka nke ọzọ, Tehran, isi obodo nke Republic nke Iran, makwara ama maka ihe ọdịnala ya, ndị njem si n'akụkụ ụwa niile na-eleta ya.
Mostzọ kachasị adọrọ mmasị ma baa uru iji rute Tehran site na Cappadocia bụ ụgbọ oloko. Ebe ọ bụ na enweghi njikọ ụgbọ elu na njem ụgbọ ala na-agwụ ike, ọtụtụ ndị njem na-ahọrọ iso Transasya Express mee njem. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a, mana nke mbụ bụ odida obodo. N'oge ị na - eme njem, ị nwere ike ịnụ ụtọ ịdị ọcha nke ọdịdị adịghị emetụ ya mma. Nke abụọ, ịgaghị echegbu onwe gị banyere ịgbazite ụgbọ ala na ịchọta ebe ị ga-ehi ụra abalị n'ihi na ị ga-enwe akwa dị mma na ngalaba ụgbọ oloko gị. N'ikpeazụ, ndị Iran na Turkey ndị yiri onye ọ bụla ọzọ. Na njem ụgbọ oloko a, ịnwere ike ịnwe ndị gị na ha bụ enyi obodo. Ka ị na-emeta ndị enyi, ị ga-amụta ọtụtụ ihe n’aka ha.
Cappadocia dị nso na ọdụ ụgbọ oloko Kayseri, ebe Transasia Express kwụsịrị. A na-ebugharị ụgbọ elu n'ọdụ ụgbọ oloko a site na ugboala na-ebugharị. Traingbọ okporo ígwè Kayseri bụ ebe njem gị na isi obodo Iran bidoro. Mgbe nyefechara, ụgbọ oloko mara mma nke nwere akụkụ mmadụ 4 ga na-eche gị. N'echi ya, n'ehihie, ị ga-aga njem ụgbọ mmiri n'Ọdọ Mmiri Van. N'ime awa ole na ole, ụgbọ mmiri ahụ ruru Van, ebe ụgbọ okporo ígwè na-anabata Iran. Na Transasya Express enwere ụgbọ erimeri na ụlọ mposi na njedebe nke ụgbọ ala ọ bụla.
Echiche dị omimi, mmetụta dị egwu maka ndị njem niile nke Transasia Express,
enwere ike inye ndị enyi ọhụụ, ncheta agaghị echefu echefu na ọtụtụ ihe. Ọ ga-amasị gị ịmụtakwu ihe? You nwere ike ịlele ozi niile ebe a (https://transasiatrain.com/train/cappadocia-tehran-train-ticket/)
Ebee ka Angan High Speed ​​Train Station? Kedu otu esi aga ọdụ ụgbọ okporo ígwè Ankara High Speed?
Kedu ka esi esi banye n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul?
Olee otú iji nweta Denizli Teleferik na Bağbaşı Plateau?
Ọzụzụ Mmụta Mba Nile na Kapadoshia
Balloon dị na Kapadoshia, Helicopter Tour na Istanbul
A na-eme nzuko nchebe UIC na Tehran
1. International International Egwuregwu okporo ụzọ na ọdụ ụgbọ mmiri a ga-enwe na Tehran
1. Mgbakọ International Railways na Ọdụ Ụgbọ Mmiri ga-enwe na Tehran
TCDD tiketi - Otu esi zụta tiketi ụgbọ oloko Ebe ịzụta tiketi ụgbọ oloko
Kedu ka anyị si atụkwasị ụgbọ okporo ígwè a ọdụ? | Nkụzi Ọdịdị Dị Elu
Kedu ka ụgbọ okporo ígwè Bursa High Speed ​​si mepee ụzọ?
Traingbọ okporo ígwè Kayseri
Ọnọdụ ebe Transasia Express na-akwụsị
Transzọ Transacia Express
Transasya Express ụgbọ oloko
Bursa ụbọchị 15 anwụ
Ndị njem njem ruru nde 14 jiri ụgbọelu na Jenụwarị
IETT na-eme ememme ncheta nke ọwara na Nostalgic Tram
Denizli Transportation Investments Na-akwụ Ego 2019
Antalya Transportation Master Plan Studies gaa n'ihu
Nkwupụta okike maka nwoke: A ga-azụta Lamas
Mara Prozụ ahịa: A ga-azụta Rostrum na Ihe Mkpọchi
Sapanca Kırkpınar Cable Car Project kwụsịrị
SAMULAŞ Nweta Ọgbọ Ndị Ọdịnihu
Filyos Port Superstructure Tender ga-anọrọ n’afọ a
Ndị ọrụ Metro Istanbul Nwere Ahụhụ Ma Mụta Ihe
EGO General Manager Alkaş zutere ụmụ akwụkwọ na-akwadebe ọrụ na Rail Systems
Turkey mbụ Winter Rally Race Amalite na Sarikamish
Ihe Model S See Okporo ilzọ Mgbapụ Wepụ
Volvo na-achọ onye isi ọhụụ!
Kasị họọrọ Automobile Year 2019 na Turkey
Ọrụ ụgbọ oloko dị elu na-abịakwute ndị Eskişehir
Esgwọ Transportgbọ njem Ọha na Bursa Na-eto! Tarif Ọhụrụ Dị Irè Ọhụhụ nke 1